Sonke ujwayelene izinhlobo ezahlukene zezinkambi kanye nezici zabo. Ezinye izinhlobonhlobo ezolile, kuyilapho abanye ithoni, kodwa kukhona nalabo abangakwazi ukunikeza umphumela mnandi.
Tea ukudakwa: kuyini?
Umehluko omkhulu phakathi lolu hlobo ukudakwa utshwala noma izidakamizwa - a ukucaciseleka kwengqondo buciko ephelele isimo. isimo esinjalo ngokuyisisekelo ukuhluka ukudakwa ngomqondo classic. Ngaphezu kwalokho, ngemva akukho umuzwa a Hangover noma nanoma ibuphi ubuthakathaka obungokwenyama.
Yinganekwane Noma ngokoqobo?
Tea ukudakwa - Yinganekwane Noma Yiqiniso? Abaningi bakholelwa ukuthi akunakwenzeka ukuba uthole asangene itiye. Lokhu kwenzeka ngenxa yezizathu eziningana:
okulindele Yehlulekile. Njengoba itiye lokudakwa sihluke kakhulu ezinye izinhlobo zabantu musa cabangela lokhu isimo ngandlela-thile ekhethekile.
imikhiqizo esezingeni eliphansi. Ngeshwa, manje emakethe kukhona elinegazi eziningi itiye Chinese, ngakho kungcono ukuthole kusuka abakhiqizi omethembayo.
ukuphisa engalungile. Uhlobo ngalunye itiye kudinga ekhethekile ukupheka zikagesi, ukuphazamiseka okuholela ekulahlekeni izakhiwo yalesi siphuzo.
Isimo esibi sengqondo. , Udinga nokukulungiselela ngaphambi kokuqhubeka nge emcimbini itiye. Uma umuntu emphethweni, elambile, nolaka, akukho itiye odakiwe akasamukelanga.
Tea ukudakwa - lokhu akukona inganekwane, kodwa izici zayo siqu. Kuphela by ukuqonda ins kanye nasemigwaqweni netiye emcimbini ngokwayo, kungenzeka ukuba sifinyelele isimo oyifunayo.
Lapho lafinyelela odakwe ngumuntu itiye Kwenzeka imizwa:
Imibala kwanda, konke kube mnandi futhi ekhululekile;
imicabango ngokucace kakhudlwana, kukhona imibono emisha, kufika isinqumo kwanoma iyiphi izimo okuphazamisayo;
kukhona isimo ezolile futhi enesimo esihle sengqondo;
umuzwa induduzo nethemba ngekusasa.
Zonke zalezi zimpawu baphathe sengqondo esiqondile hhayi lonakaliswe nemiphumela ebuhlungu. Kunalokho, balanda abantu umuzwa wokuzwana ngokwabo kanye nezwe elingaphandle.
Lapho belungela ukuya khona yayo kungekho ubuqili namasu hhayi, udinga nje apheke phisa enamandla kakhulu. Labo abafuna ukusuka lo mphumela ukuxubana, baphuze izingilazi ezimbalwa. Nokho, kuyafaneleka ukuthi ukudakwa chifir akuhlangene ne injabulo etholakala izinga itiye Chinese. Kunalokho, it has nomthelela ongemuhle empilweni - kwenhliziyo ophilisayo, umuntu imbozwe umjuluko okunamathelayo, kungenzeka Ukugodola nesicanucanu. Yiqiniso, akukho ukuphumula ngokuvumelana ngemuva kokusebenzisa leli "isiphuzo" is hhayi waphawula.
Kukhona isimo esicishe sibe ujabula abantu kuphakama kusukela okuqukethwe itiye isitshalo evuselela, tianida, alkaloids futhi i-guanine ne. izitsha ubuchopho uvuleke, sigcwale umoya-mpilo, kukhona asebenzayo runningaway serotonin, ekhuthaza ukucabanga ngezinto ezinhle futhi ukunika ekuqhumeni amandla. Ngesikhathi esifanayo iyiphi imiphumela emibi emzimbeni futhi psyche ngokuvamile ningagcini.
Indlela yokufeza ukudakwa
Ukuze uthole injabulo inkomishi yetiye kweqiniso, ukufeza isimo zokudakwa, kubalulekile ukugcina imithetho elandelayo:
ukukhetha endaweni efanele emcimbini itiye;
ukusebenzisa imishini ephezulu, noma zobumba teapot zobumba, eside esaziwa ukushisa;
isimo kumele kube ezolile, ofanele oluzayo Tea Party;
Ngamunye ezihlukahlukene itiye kudinga indlela ekhethekile sokulungiselela, kubalulekile ukuba ngokuqinile ulandele algorithm;
asikho isidingo sokuthi ube itiye ezibizayo, kodwa ngokuqinisekile fresh futhi kumele agcinwe;
enqubweni yokuphisa lesi siphuzo kufanele kube kancane futhi zijabulise;
ngaphandle ukunambitheka, kufanele banganakwa, nokunambitheka itiye.
Ngakho, ukuzizwa kwakunesasasa itiye can hhayi kuphela nokusetshenziswa ngokuqondile, kodwa futhi khona ekulungiseleleni, ecabanga "umdanso" amaqabunga tea, amakha umlingo isimo jikelele.
Tea ukudakwa: yeka ukuthi luhlobo luni?
Noma yimuphi ezihlukahlukene izinga itiye Chinese unika nomthelela abantu ngokwezinga elikhulu noma elincane.
Ngakho kusukela itiye itiye ukudakwa kungenzeka? Izinhlobonhlobo athandwa kakhulu yilezi:
"TIEGUANYIN" - ingenye izinhlobo best of itiye Chinese, libhekisela esigabeni oluluhlaza.
"Da Hong Pao" - kwentaba itiye Chinese, oolong kubhekwa isibilile.
"Puer" - omunye ezichumayo ephethe ukunambitheka ocebile kanti iphunga.
"Nokomisa Dan Huang Cong" - libhekisela oolong, has izinhlobo eziningi nokunambitheka kuye onjani orchid samanje (uju, jade et al.).
"Zhouguy" - ubhekwa itiye lwasendulo. Akukhona nje kuyinto ukudakwa emnandi, kodwa futhi ephatha yezifo pheshana emathunjini. Isikhathi esiningi abathengi kanye Ongoti ngemadvodza.
"Itiye Chaozhou" - liqukethe hallucinogens, kodwa akukho umbono noma wayephazamisekile akusebenzi, kodwa kunalokho, kuyasiza uphumule, ukusungula isimo sempilo futhi sithuthukise impilo.
"Dun Din" - kuba nomphumela omuhle ohlelweni sezinzwa futhi mzimba. Rich in amavithamini namaminerali, udume yephunga layo elinuka.
"Shuysyan" - iparele Oolong, kubhekwe yakudala ye-Chinese. Ngaphezu kwalokho ukunambitheka emnandi kanti iphunga has ukuphulukiswa nomthelela emzimbeni.
Ukudakwa ngu "Puer"
Kungenzeka yini ukuba itiye ukudakwa kusukela "Puer"? Lokhu ezihlukahlukene isibe sibonga eyayithandwa umsebenzi abakhangisi abathi anakho umphumela cishe imilingo. Ngakho-ke, intsha yanamuhla kukhona engakwenqeni zama lokhu isiphuzo. Nokho, abaningi uphatheke kabi, hhayi ukufinyelela elamukelekile. Ingqikithi yale itiye obucayi xaxa, futhi balithole kungaba Ongoti kweqiniso. Lokhu itiye ine ukunambitheka engowenhlabathi, kodwa okungase kuthintwe asithena, izithelo noma amantongomane. Into esemqoka ukuthi kwakungekho ebabayo khona yawo lubonisa ikhwalithi embi Welding.
umphumela ebonakalayo tonic;
normalizes isimo esingokomzwelo;
aqede imisipha ukungezwani, umzimba iba lula;
It uyazihlanza umqondo kusukela izinkinga kanye nemicabango engakhi;
It ilungisa emihle.
Ngo gaiwan ibekwe isilinganiso esifanele amaqabunga tea futhi ugcwele amanzi abandayo imizuzu emihlanu.
Encwadini amanzi esikhulu iketela uyabaselwa kuya degree 95, futhi ushiya "Puer" ofakwe futhi, amanzi ethelwa ngokuqondile, ukugeza izinkomishi wakhe.
Ukuze itiye "siphaphama ', bevale ngesivalo bese ulinda esingaphansi komzuzu, bese futhi sigcwale amanzi.
Five - imizuzwana eyishumi batheleka Chahal futhi sekuqala ukufudumala izinkomishi.
Ukunambitheka kanye nephunga elimnandi phendla yokuphisa omusha ngamunye. It is waphawula, ukuya ngokuqina "Puer", namandla umphumela lokudakwa.
Kukholakala ukuthi ukusetshenziswa njalo zezinkambi kusiza umuntu ukuba ubuyisele impilo ngokomzimba nangokwengqondo, ikhuthaza impilo ende futhi esebenzayo.
Ukudakwa ngu "Da Hong Pao"
Kungenzeka yini ukuba itiye ukudakwa kusukela "Da Hong Pao"? "Njengokuhlaba Puer", lokhu ezihlukahlukene kuthandwa kakhulu ikakhulukazi ngoba yenza isimo appreciable lokudakwa. Tea ngokwalo lisho oolong, kodwa ngamagama ashubile isibilile. Simila emaweni futhi kubhekwa izinga eliphezulu kakhulu futhi funa.
Uma sicabangela izici ukunambitheka itiye, kuba ukwehluka ngokumangalisayo aftertaste yayo. Ngemva kokuya ungiphuzise, ungaziqhenya amanothi elinuka, bese bethola ukunambitheka uju. Iphunga lokusanhlamvu vanilla amnandi futhi caramel wezwakalisa ushokoledi namantongomane.
Isenzo of "Da Hong Pao":
uma uthatha ekuseni, ungathola ephelele tonic nomphumela, futhi uma kusihlwa, kuba ezifanele ukuze akhulule ukukhathala athobe;
Kwenza ingqondo umsebenzi ubuchopho ecacile futhi esebenzayo;
has okwelapha - kunciphisa izinga cholesterol imithambo yegazi kanye inhliziyo kuqinisa;
normalizes umzimba, eqeda ubuthi kanye nemfucumfucu.
Thatha teapot futhi kancane eshubile.
Ngokulandelayo, ukuzibeka esimweni amaqabunga tea, isipikili up ngamanzi amancane abilayo, izinga lokushisa ezingekho ngaphezu ayisishiyagalolunye degrees.
Ngemva kwesigamu somzuzu amanzi amuncekela bese egcwele embizeni entsha.
Kuye amandla oyifunayo, kulindeleke isikhathi esithile. itiye eqinile ukwenziwa imizuzu emibili, buthaka - esingaphansi komzuzu owodwa.
It azigcina impahla yayo kuze kube eziyisikhombisa yokuphisa lesi siphuzo.
Phuza ayiphuze ekhethekile ngobumba izinkomishi - izinkomishi. Kulokhu, nge gulp ngamunye, usuke eveza ngendlela ekhethekile, futhi umuntu ahlangabezane emizweni ezintsha, ukunambitheka kanye nomphumela oludakayo.
Kufinyeta, Ngithanda wazi waphinda ukuthi itiye lokudakwa hhayi kuphela engenabungozi empilweni futhi akabubangeli ukulutheka, kodwa kunalokho Kunalokho, kusiza ekudambiseni ukucindezeleka futhi kujwayeleke isimo sengqondo, ukuthola ikhambi lezinkinga eziningi. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi konke okuhle ngokulinganisela, iya kude nokusetshenziswa itiye ezinjalo akufanele.
"Samsung" eliphezulu omakhalekhukhwini. isihenqo Touch, interface enembile, imishini ocebile lobuchwepheshe: ahlanganisa yonke indalo!
Download bot kuya slammer